Nagu saabsan - Shenzhen Sanying Technology Co., Ltd.
Shenzhen Sanying Technology Co., Ltd. waa shirkad laga maal galiyo Taiwan oo cilmi baaris, soo saar iyo iibin ku sameysay qalabka maaskaro muddo ku dhow 20 sano. Qalabka mashiinka maaskaro khaaska ah iyo soosaarayaasha qalabka maaskaro la xiriira. Badeecadaha shirkadda ee "SUNNY", soo bandhigida qaybo tayo sare leh oo caalami ah, oo leh kalsooni sarreysa, xasilooni sarreysa, aqoonsi suuq qiimahoodu hooseeyo iyo raalli ahaansho, adeeg tayo sare leh oo iibka ka dib iibka ah ee inta badan macaamiisha. Japan, Kuuriya, Taiwan iyo meelo kale oo leh goobo adeegyo iibka kadib.
Waqtigan xaadirka ah, shabakadda iibka ee shirkadda ayaa daboolay dhammaan magaalooyinka waaweyn ee Shiinaha. Saldhig ahaan wax soo saar, Shenzhen Sanying wuxuu leeyahay R & D xoog leh iyo karti wax soo saar ee alaabada tiknoolajiyadda sare. Si loola jaanqaado horumarka joogtada ah ee suuqa iyo baahida macaamiisha ee alaabooyinka tayada sare leh, shirkaddu waxay u hoggaansameysaa falsafadda ganacsiga ee tayada xirfadeed, hawlgal daacad ah iyo adeeg tixgelin leh, waxay dedejineysaa cilmi-baarista iyo horumarinta alaabooyinka cusub, hagaajinta tayada adeegga, waxayna ku dadaaleysaa Macaamiisha inay sii wadaan inay sare u qaadaan wax soo saarka iyo tartanka oo ay si firfircoon u shaqeeyaan.
Falsafada ganacsiga: wax soo saar heer sare ah, adeegsi feker leh oo waqtigiisa ku habboon
Xuddunta Sanying: R & D, wax soosaarka, suuqgeynta iyo kooxda wada shaqeynta ee wada leh isla qiimaha iyo dareenka masuuliyada ayaa ah udub dhexaadka tartan ee Sanying.
Nadiifinta kooxda: ku adag edbinta, raacdada joogtada ah, wadaagga weal iyo hoog, gacmaha la isula tago mustaqbalka, u jahaysan dadka, daacad iyo ganacsi, adadag iyo hufnaan leh, isla markaana abuuraya hal abuur
Nadiifinta tenet: xirfadle, xamaasad leh, tayo sare leh oo waara
Bartilmaameedka Ganacsiga: heerka qanacsanaanta macaamiisha 99%, heerka imtixaanka ee 100%, heerka gaarsiinta alaabada 98%
Wax soo saar heer sare ah, adeegsi maskax leh iyo adeeg waqtigiisa ku habboon
Maqaarka Xumbada Xakamaynta, Mashiinka Maaskaro Wejiga, Mid Ka Mid ah Jiidka Mashiinka Maaskaro, Baakadaha Xumbada Baakadaha, Dharka Xumbada Cas, Soo-saaraha Maaskaro,